११ बैंकको निक्षेप खर्बमाथि, कुन बैंकको कति ? (सूचि) | Tungoon
११ बैंकको निक्षेप खर्बमाथि, कुन बैंकको कति ? (सूचि)
काठमाडौं । बैंकहरुले धमाधम आफ्नो वासलातको आकार बढाइरहेका छन् । दुई वर्ष अघिसम्म एक खर्ब निक्षेप पुर्याउने एउटा पनि बैंक थिएनन् । तर, अहिले ११ बैंकले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
पुँजी बढेसँगै बैंकहरुले व्यवसाय पनि बढाएका छन् । यद्यपि पुँजी वृद्धिको अनुपात थेग्न सक्नेगरी व्यवसायको वृद्धि नभएको बैंकरहरुको गुनासो छ ।
एक वर्षको अवधिमा खर्बमाथि निक्षेप संकलन गर्ने ५ बैंक थपिएका छन् । अबको १ वर्षपछि भने १० वटा बैंकले खर्बमाथि निक्षेप पुर्याउने देखिन्छ । खर्बमाथि निक्षेप पुगेपछि बैंकहरुको नाफा पनि अर्बमाथि भएको छ ।
पूर्णसरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपालमा भएका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने बैंक हो । वाणिज्य बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकले साढे ३२ अर्ब अर्थात् २२ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो बढी निक्षेप संकलन गर्ने बैंक हो एनआइसी एशिया बैंक । एनआइसी एशियाले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मा १ खर्ब ७५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । यो बैंकले एक वर्षको अवधिमा ५५ अर्ब २९ करोड अर्थात् ४६ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको हो ।
पछिल्ला दुई वर्ष आक्रम बजार बिस्तारमा उत्रिएको एनआइसी एशिया निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने बैंक बनेको छ ।
सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने नविल बैंक निक्षेप संकलनका हिसाबले भने तेस्रो नम्बरमा छ । नविलले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकले २८ अर्ब ९ रोड अर्थात् २३ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको हो ।
त्यसैगरी, गत वर्ष सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने निजी क्षेत्रको बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक यो वर्ष भने पछि परेको छ । बैंकले यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकले १२ अर्ब २६ करोड अर्थात् साढे ९ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको हो ।
त्यसैगरी, गत वर्षको भन्दा २० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अर्थात् २० प्रतिशतले निक्षेप बढाउँदै एभरेष्ट बैंक धेरै निक्षेप संकलन गर्ने बैंकको सूचीमा पाँचौं स्थानमा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले १ खर्ब २४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी, १ खर्ब १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दै ग्लोबल आइएमइ बैंक छैठौं स्थानमा छ । यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा बैंकले गत वर्षको पुस मसान्तको भन्दा १२ अर्ब ९६ करोड बढी अर्थात् १३ प्रतिशतले निक्षेप बढाएको छ ।
कृषि विकास बैंकले पहिलोपटक खर्ब बढी निक्षेप संकलन गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा १२ अर्ब अर्थात् १२ प्रतिशतले निक्षेप बढाउँदै बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक र प्रभु बैंक पनि खर्ब माथि निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
सिद्धार्थ बैंकले गत वर्षको पुसको भन्दा यो पुसमा २० अर्ब ८१ करोड अर्थात २४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी, हिमालयन बैंकले एक वर्षको अवधिमा साढे १३ अर्ब अर्थात् साढे १४ प्रतिशतले बढाएर १ खर्ब ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।
त्यस्तै, एक वर्षको अवधिमा १३ अर्ब ७८ करोड अर्थात् १५ प्रतिशतले बढाएर नेपाल बैंकले १ खर्ब ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ निक्षेप पुर्याएको छ ।
त्यसैगरी, १८ अर्ब ८४ करोड अर्थात् २२ प्रतिशतले बढाएर प्रभु बैंकले १ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा १५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढाए पनि नेपाल एसबिआइ बैंकले यो पुसमा एक खर्ब निक्षेप पुर्याउन सकेन । बैंकले ९७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ ।
त्यसैगरी, चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा एनएमबि बैंकले ८८ अर्ब ७ करोड, सानिमा बैंकले ८५ अर्ब ६८ करोड, माछापुच्छ्रे बैंकले ८५ अर्ब १७ करोड, प्राइमले ७६ अर्ब ७२ करोड, सनराइजले ७६ अर्ब ६ करोड, लक्ष्मीले ७५ अर्ब ८९ करोड, कुमारीले ७५ अर्ब ४४ करोड, मेगाले ७० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
त्यस्तै, जनता बैंकले ६८ अर्ब ४३ करोड, सिटिजन बैंकले ६५ अर्ब १२ करोड, एनसीसी बैंकले ६४ अर्ब ७१ करोड, सेञ्चुरी बैंकले ६४ अर्ब १२ करोड र एनबी बैंकले ५२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, बैंक अफ काठमाडौं र सिभिल बैंकले भने चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेका छैनन् । मसान्त सकिएको ३५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।
Bank Poush 075/ Poush 074 / YOY Growth
Rastriya Banijya Bank 181,596,629 149,104,329 32,492,300 21.79%
NIC Asia 175,764,356 120,467,013 55,297,343 45.90%
Nabil 149,382,011 121,289,801 28,092,210 23.16%
Nepal Investment 142,106,652 129,845,324 12,261,328 9.44%
Everest 124,177,926 103,299,183 20,878,743 20.21%
Global IME 113,175,953 100,216,310 12,959,643 12.93%
Agricultural Dev 110,132,753 98,173,412 11,959,341 12.18%
Siddhartha 106,384,918 85,566,023 20,818,895 24.33%
Himalayan 106,107,324 92,634,974 13,472,350 14.54%
Nepal Bank 105,678,286 91,898,690 13,779,596 14.99%
Prabhu 104,981,380 86,141,047 18,840,333 21.87%
Nepal SBI 97,837,621 85,169,260 12,668,361 14.87%
NMB 88,070,975 80,552,649 7,518,326 9.33%
Sanima 85,680,841 68,500,415 17,180,426 25.08%
Machhapuchchre 85,176,247 65,798,373 19,377,874 29.45%
Prime 76,727,057 71,060,891 5,666,166 7.97%
Sunrise 76,062,607 63,269,277 12,793,330 20.22%
Laxmi 75,894,566 60,279,392 15,615,174 25.90%
Kumari 75,448,539 57,849,357 17,599,182 30.42%
Mega 70,859,462 45,573,713 25,285,749 55.48%
Janata 68,438,423 52,801,374 15,637,049 29.61%
Citizens 65,124,281 58,464,929 6,659,352 11.39%
Nepal Credit & Commerce 64,717,387 59,152,766 5,564,621 9.41%
Century 64,127,818 52,177,173 11,950,645 22.90%
Nepal Bangladesh 52,471,689 41,974,650 10,497,039 25.01%
Total 2,531,309,249 2,469,340,670
Previousपोहोरको ४० हजार मेट्रिक टन चिनी गोदाममै राखेर नयाँ उखु पेल्न सुरु
Nextप्रादेशिक संरचनाअनुसार पर्यटन ऐन संशोधन हुँदै
गिरिजाप्रसाद कोइराला सहभागी भ्रष्टाचार मुद्दाः ९५ पटक पेसीमा, अझै किनारा लागेन